Madaxweyne; Kala Horumarinta Hawlaha Qaranku waa Halbeega Hoggaamintaada! By: Cumar M. Faarax | Baarcadeeye
Madaxweyne; Kala Horumarinta Hawlaha Qaranku waa Halbeega Hoggaamintaada! By: Cumar M. Faarax
Haddii uu la kulmi lahaa madaxweyne Muuse Biixi ama uu si uun talo loo weydiin lahaa, kalamuu hadleen qaddiyadda ictiraaf raadinta Somaliland.
Sidoo kale lama uu soo qaadeen saldhiga millatari ee Imaaraadka iyo sidii loo maamulay xaqul-qalinkii heshiiskaas. Sidaas si la mid ah madaxweynaha wakhti kagamuu qaadeen maamulka hawadda ee toddobaadkii hore ay dawladda itaalka daran ee Soomaaliya la wareegtay.
Haashin Maxamed Guuleed, oo 50 jir ah oo degan Magaaladda Hargeysa, waxa uu madaxweynaha cusub ee Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi, haddii uu hor-fadhiisan lahaa uu ka codsan lahaa, inuu sannadkan cusub ee 2018 uu wax ka qabto sicir-bararka iyo qiime dhaca lacagta dalka.
Waxa kale oo uu u soo qaddimi lahaa inuu dalka ugu dedaalo sidii biyo ku filan loogu qodi lahaa degaannada Somaliland oo dhan.
Madaxweyne Muuse Biixi, waxa sannadka 2018 uu u curtay, isagoo 18 maalmood uun xilka haya, waxaa halbeeg u noqon doonta hoggaamintiisa siduu u kala horumariyo baahiyaha iyo hawlaha qaranka ee miiska u saaran.
Shirkii wadatashiga golaha wasiirrada oo Hargeysa uga socday muddo afar maalmood ah 23kii illaa 26kii Bishii December ee la soo dhaafay, waxa ka soo baxay 13 qoddob.
Wax ka qabashada sicir-bararku wuxuu ahaa qoddobkii 7-aad ee war-murtiyeedkii laga soo saaray gebo-gabadii shirkaas. Waxaanu u qornaa “In la sameeyo guddi farsamo oo ka soo talo bixisa xal u helidda Sicir-bararka.”
Madaxweyne, xaaladda sicir-bararku waa mushakilad ummaddu la soo nooleyd muddo toddoba sannadood ah oo aad ka dhaxashay dawladdii kaa horreysay. waxaana lama huraan ah inaad qaado talaabooyin waaweyn oo lagu dhayi karo boogtan bogsan wayday ee bulshada wadne qabadka ku ah, isla markaana ka dhigan dhiciskii bakhtiyi jiray inta birta loo soo sido!
Waxa kale oo indhaha lagu hayaa afarta bilood ama 120-ka maalmood ee ugu horreeya muddo xileedkaaga talaabooyinka aad qaadi doonto ee nolosha bulshada taabaynaysa ama wax ka beddeli karta sida maanta ay tahay.
Madaxweynaha shanaad ee Somaliland, ayaa magacaabay 14-kii December ee kal-hore golihiisa wasiirrada oo ka kooban 23 wasiir iyo 9 wasiir ku-xigeen.
Waxa la soo dhaweeyey inuu shaandhada ku reebay xubno waajibaadkii ay hayeen ku eedoobay oo ay ummadda hore isu seegeen.
Falanqeeyeyaashu, waxay aaminsan yihiin in golaha wasiirrada ee xukuumadda cusub ay jiraan laba ardaa oo 32-kii xubnood ee la magacaabay badsaday oo midna lix calafsaday, halka raaska labaadna shan xubnood ka heleen wasiirradii iyo wasiir ku-xigeennadii, oo haddii Boqolay loo beddelo saamigoodu kala noqonayo 18.7% iyo 15.6%.
Tiradaasi haasaawaha ka sokow, may nusqaamin filashada iyo yuhuunta togan ee ay bulshadu ka qabto xukuumadda dhalatay.
“Madaxweyne, waxa badh naga soo hadhi lahaa oo aanu ducanna kuugu dari lahayn , haddii aad fuliso saddex qoddob oo ku jiray balanqaadkaagii oo kala ahaa; inaad ka shaqeyn doonto sidii Somaliland ay u gaadhi lahayd isku filaansho la xidhiidha dhinaca raashinka iyo wax-soo-saarka, ”ayuu yidhi Axmed Maxmed Saleebaan, Aabe dhalay afar carruur ah oo degan caasimadda Hargeysa. “Qoddobka labaad oo ahaa jihayntii dhallinyarada iyo sidii loo gelin lahaa shaqo qaran. Waxa kale oo ka mid ah xakamaynta sicir-bararka iyo wax ka qabashada musuqmaasuqa oo ah tiirarka waaweyn ee aan kaa dhawrayno fulintooda.”
Ugu dambayn,waxa madaxweyne Biixi oo lagu amaanay hal-adayg iyo go’aan qaadasho uu wajahayaa inuu wax ka qabto dhibaatada Somaliland ay ku hayso shaqo la’aanta oo lagu qiyaasay inay ka badan tahay70%.
Waxaa lagu wadaa in madaxweynaha ay wakhti badan oo uu gelin lahaa aqoonsi raadinta iyo sidii uu waddanka ugu raadin lahaa maalgashi caalamiya uu kaga mashquuli doono sidii uu u hagaajin lahaa dhibaatooyinka maxaliga ah ee Somaliland ka taagan oo aan mid aan indhaha laga qarsan karin isla markaana wax u dhimi karta kalsoonida shacbigu ku qabaan qaranimadooda ay ku soo tabcayeen rubuc-qarnigii la soo dhaafay.
Waxaan ku soo ururinayaa ereyo ka mid ah heesta “Maarayso Noloshaada” ee uu tiriyey Abwaan Cali Bare Xuseen ee ay ka mid ahaayeen:
Dadku kugu Majeertiyo
Meesha aad ku Dhaqantaa
Khayraad Mug weyn
Nimco lagu Manaystee